Pakistàna: Sazy henjana kokoa ho an’ny fanolanana, isan’izany ny famosirana amin’ny fomba simika · Global Voices teny Malagasy
Mifamahofaho ny fanehoankevitra momba ireo lalàna vaovao
Voadika ny 08 Desambra 2020 5:34 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Nederlands, Français, Italiano, Deutsch, polski, English
Vehivavy Pakistaney mihira ny “Aur Woh Rapist Ho Tum” (“Ianao no mpanolana”). Pikantsary an'i Aurat March avy ao amin'ny Youtube.
Ny 24 Novambra teo, neken‘ny governemanta Pakistaney ny foto-pitsipika amin'ireo lalàna henjana kokoa hanasaziana ny herisetra ara-nofo, ka tafiditra ao anatin'izany ny famosirana amin'ny fomba simika atao an'ireo mpamerin-keloka.
Nankatoavin'ny Kabinetra Federaly ireo lalàna, antsoina hoe Didim-panjakana Manohitra ny Fanolanana (Fanadihadiana sy Fitsaràna) ary ny Didim-panjakana 2020 (Fanitsiana ny) Lalàna Famaizana, ary miandry ny fanaovantsonian'ny filoha Arif Alvi.
Manana fahefana midadasika be sy mahasahana endrika maro amin'ny resaka heloka bevava io fehezana didim-panjakana io, isan'izany ny anjara toeran'ny vehivavy amin'ny fandrafetana pôlitika, fepetra ikendrena ny hijerena malaky ny raharaha mahakasika fanolanana, ny fiarovana ireo niharam-pahavoazana sy ny vavolombelona, ary ny fananganana angondrakitra nasiônaly misy ny anaran'ireo mpanao herisetra ara-nofo.
Teboka iray mivoitra ao ny fanitarana ny famaritana araka ny lalàna ny atao hoe fanolanana. Amin'izao fotoana izao, ny lalàna famaizana ao Pakistana dia mamaritra ny fanolanana ho toy ny “fanaovana firaisana ara-nofo amin-jazavavy latsaky ny 15 taona, nisy ny fanekeny na tsia.” Ilay fanitsiana natao dia hanitatra ny famaritana ho amin'ny vehivavy anatin'ny sokajin-taona rehetra sy ny lehilahy latsaky ny 18 taona, ary hampiditra ao anatiny ireo fanondroana toy ny “fanolanana faobe”, ny “nanova fananahana”.
Ny fitiliana amin'ny alàlan'ny rantsan-tànana roa, niasa be tao Pakistana rehefa manao fitiliana ny mpitsabo mpiaramiasa amin'ny fitsaràna mba hamaritana hoe nisy sa tsia ny fanolanana, dia horaràna ihany koa ao anatin'ireo lalàna vaovao.
Taona telo nanaovana hetsipanoherana ny herisetra mifototra amin'ny maha-lahy na maha-vavy vao tonga amin'izao fanovàna lalàna izao, hetsika natosik'ireo tranga fanolanana faran'izay noresahana indrindra an-gazety toy ilay fanolanana sy famonoana zazavavy fito taona tany akaikin'i Lahore tamin'ny 2018, na ilay fanolanana renimpianakaviana niteraka roa tamin'ny Septambra tamin'ity taona ity rehefa sendra olana teny an-dàlambe migodana ny fiarany.
VAKIO BEBE KOKOA: Mitaky Ny Rariny Ho An'i Zainab, Ankizivavy 7 Taona Voaolana sy Novoina ho Faty Tao Kasur ny Pakistaney
VAKIO BEBE KOKOA (amin'ny teny anglisy): In Pakistan, women stage nationwide protest in response to shocking rape incident
Ny sazy faratampony famonoana amin'ny alàlan'ny fanantonana no sazy hofaritan'ireo lalàna vaovao, na fampidirana am-ponja henjana ho an'ireo izay voaheloka ho nanolana, fa ny teboka mbola miteraka resabe ao anatiny dia ny fampidirana ny famosirana amin'ny fomba simika an'ireo mpanao herisetra ara-nofo, izay tsy hotanterahana raha tsy efa nahazoana ny faneken'ilay nanao ny heloka.
Betsaka ny fanehoankevitra mifamahofaho ao Pakistàna momba izay teboka farany izay.
Ireo mpikatroka mpiaro ny zon'ny vehivavy sy ny ankizy, hatramin'ireo mpitarika fivavahana, dia samy nanakiana ny fampidirana ilay famosirana amin'ny fomba simika. Nabila Feroz Bhatti, mpanatanteraka ao amin'ny Hetsik'i Punjab ho an'ny Zon'ny Ankizy, nilaza tamin'ny “Union of Catholic Asian News” hoe:
Tsy maintsy alohan'ny fampiharana ny sazy ny fanamelohana. Ilaintsika ny manamafy ny rafitra toy ny fanadihadian'ny pôlisy, ny dingana medikaly sy ara-pitsaràna. Ny fanamelohana no olantsika fa tsy ny fanasaziana. Raha kely indrindra, 97 isanjaton'ireo voampanga ho nanolana teto amin'ny firenena no tsy voaheloka mihitsy noho ny tsy fetezana nisy tao anatin'ny rafitra.
Maheen Agha, mpampiasa Twitter, nilaza fa ekeny hoy toy ny famaizana ireo mpanolana ny famosirana amin'ny fomba simika:
Neken'ny praiminisitra sy ny kabinetra federaly ny sazy famosirana amin'ny fomba simika. Fandresena goavana io. Samia mivavaka ho an'ny fampiharana azy. #ChemicalCastrationOfRapists #imrankhanPTI— Maheen Agha (@Lady_Says11) 24 Novambra 2020
Lasa saina i Zarrar Khuhro, mpanao gazety:
Resabe mbola mandeha erantany ny famosirana amin'ny fomba simika ary tena ampiharina tokoa any amin'ny firenena sasantsasany ao Etazonia. Tsy misy olona milaza fa io no ilay vahaolana mahagaga ary mazàna dia ilainao eto ny mandray fepetra hatrany ifotony. Kanefa, heveriko fa tsara amin'ny ankapobeny io didim-panjakana io (tiako ny hahita azy hahazo ny fankatoavan'ny antenimiera). https://t.co/RrmKLZ44lR
— Zarrar Khuhro (@ZarrarKhuhro) 25 Novambra 2020
Reema Omer, mpanolotsaina amin'ny raharaham-pitsarana ho an'ny Kaomisiôna Iraisampirenen'ireo Mpahay Lalàna, dia mandà ny fampiasàna ity kazarana sazy fananarana ity. Hoy izy nibitsika:
Tena mampalahelo, nirosoan'ny Gov ny “fanasaziana” amin'ny famosirana amin'ny fomba simika ireo mpamerinkeloka amin'ny fanolanana
Ankoatry ny olana momba ny zo, dia mampiseho ny tsy fahampian'ny fahatakarana ny ateraky ny famosirana amin'ny fomba simika ary mampietry ny fanolànana – voalohany indrindra dia heloky ny fahefana – ho heloky ny faniriana tafahoatra https://t.co/xczSoneSUy
— Reema Omer (@reema_omer) 24 Novambra 2020
Tao anaty matoandahatsoratry ny gazety Pakistaney iray “The Nation“, ilay injeniera Rabia Aslam koa dia naneho ahiahy momba ny famosirana amin'ny fomba simika:
Noho ny feritraina sy resaka hôrmôna tsy milamina ao anatiny dia antsoina hoe mpanolana ny olona iray nanao herisetra ara-nofo. Raha mandalo amin'ny famosirana amin'ny fomba simika izy, mety hankahala vehivavy, bebe kokoa aza, amin'ny fiheverana hoe ny resaka maha-lahy sy vavy no antony nahazoany henatra. Farany, mety ho tonga hatramin'ny famonoana vehivavy mihitsy ilay mpanolana. Mety atao maodely ny fifandimbiasana araka ny fotoana nisehoan'ny fiovan'ny mpanolana iray ho lasa mpamono.